ज्वाइँ–जेठान मिलेर रामप्रसादको हत्या,शब रातारात खोलामा ! [फाेटाे फिचर]-Nagarikaawaj.com
ज्वाइँ–जेठान मिलेर रामप्रसादको हत्या,शब रातारात खोलामा ! [फाेटाे फिचर]
रुपन्देहीको सैनामैनामा श्रृङ्खलाबद्ध ३ जनाको हत्या
कपिल ज्ञवाली /बुटवल,फागुन २६ ।
कुटपिट र हत्यामा प्रयाेग गरिएकाे लाैराे र कपडाहरु ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा ज्वाइ–जेठान मिलेर एक जनाको हत्या गरि खोलामा लगेर फालेका छन् । हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले २ जनालाइ सार्बजनिक गरेको छ ।
फागुन २४ गते बेलुका उनको कुटपिट पछि हत्या गरि फालिएको अबस्थामा २५ गते बिहान ९ बजे प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा एक जनाको शब फेला पारेको थियो ।
सैनामैना १३ समावेशी टोल पूर्वमा रहेको दानव खोलामा सैनामैना ५ सदबदरा बस्ने गरिब थारुका छोरा ३६ वर्षीय रामप्रसाद थारुको शव भेटिएको थियो ।
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा सैनामैना नगरपालिका १ बस्ने २५ बर्षिय दिनेश कवर र बुटवल उपमहानगरपालिका १८ बस्ने बर्ष २४ का हरिनारायण चौधरी (दिनेश कुवरका बहिनी ज्वाइ)लाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरुले प्रहरीसंगको बयानमा हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बुद्धिराज गुरुङले बताए ।
घटनाको कारण के थियो ?
मृतक रामप्रसाद चौधरी र अभियुक्त दिनेश कवरकी आमा बिच फागुन २१ गते सैनामैना १ मा मैलु चौधरीको बिबाहमा दिउसो नाच्ने क्रममा चिनजान भएको थियो । चिनजानपछि उनीहरुबिच फोन सम्पर्क भएको भएको समेत खुलेको छ । फागुन २५ गते बुटवल १८ मा हरिनारायणकी श्रीमतिको जन्मदिनमा सहभागि भइ राती नै घरमा ताल्चा नलगाएको भनेर उनी घर फर्केकी थिइन् ।
आमा र रामप्रसाद कोठामा बसेको देखेपछि दिनेशले सहन सकेनन्:-
दिनेशकी आमा र रामप्रसादबिच फोन भएको थाहा पाइ राती ९ बजे दिनेश आफ्नो घरमा पुग्दा आफ्नी आमा र रामप्रसाद कोठामा बसेको देखेपछि दिनेशले सहन सकेनन् । दिनेशले त्यहिबखत रामप्रसाद र आफ्नै आमालाइ कुटपटि गरेका थिए ।
रामप्रसाद भागेपछि लौराले हान्दा बारीमा ढलेका थिए । ढलेपछि दिनेश र हरिनारायण चौधरी मिलेर एटलस साइकलमा राखेर करिब साढे २ किलोमिटर टाढा रहेको दानव नदिमा लगेर मारेर फालेका थिए । अभियुक्त दिनेश सैनामैना १ बर्माडाडा निबासी सोहननाथ कवरका छोरा हुन् ।उनी ट्याक्टर चालक हुन् भने हरिनारायण भने घरबनाउने मिस्त्री काम गर्ने गर्दथे । उनी रोजगारीका लागि कतार जान ठिक्क थिए ।
उनको भिसा समेत आइसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरिक्षक महेन्द्र खड्काले बताए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा श्रृङ्खलाबद्ध ३ जनाको हत्या:-
जिल्लाको सैनामैनामा गत २ महिनाको अबधिमा ३ वटा हतयाका घटना भएका छन् ।
घटनाबारे प्रहरीले चासो बढाएको र अनुसन्धान जारी राखेको बताएको छ । खगेश्वर काफ्ले हत्याका अभियुक्त सार्बजनिक भैसकेका छन् भने रामप्रसाद चौधरीको हत्यामा संलग्न पनि प्रहरीले सार्बजनिक गरिसकेको छ । अर्काे बनकट्टा निबासी चुरे अर्यालको हत्याको बिषयमा भने प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी नायव उपरिक्षक महेन्द्र खड्काले बताए ।
याे समाचार संगै सम्बन्धित समाचारहरु पढ्नुस् :-
सैनामैनामा शंकास्पद अबस्थामा पुरुषकाे शव फेला
खगिश्वर रुपन्देहीकाे रामापूरमा गाेलि चल्याे,घरकै दैलाेमा अाएर गाेलि हान्दा १ काे मृत्यु
रुपन्देहीमा घरकै बिस्तरामै बिभत्स हत्या !
रुपन्देहीमा ७ बर्षिया बालिकाकाे हत्या,हत्यामा संलग्न हरि प्रहरी नियन्त्रणमा
कपिलवस्तुमा तरुण दलका अध्यक्षको हत्या
आमाको हत्या गरेको आरोपमा युवक पक्राउ
८० हजार लिएर हत्या, बयान हेर्नुहाेस्
चुनाबी माहाेलका बेला धनुषामा कांग्रेस नेता यादवको गोलि हानी हत्या
दुई बर्षे छोराकाे निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गर्ने बाबु
नवलपरासीमा भारतीय नागरिकको हत्या